Soomaaliya, 20 February 2019
Dhageyso Barn. Dhaqanka iyo Hiddaha, Qeybta 459-aad
Ku soo dhawaada barnaamija Dhaqanka iyo Hiddaha qeybtiisa 459-aad. Waxa aalaba soo diyaariya, soona jeediya Axmed Faarax Cali (Idaajaa).
Ku-xigeenkii Xeer-ilaaliyaha oo Muqdisho Lagu Diley
Wararka ka imaanaya magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in koox hubeeysan ay maanta Muqdisho ku dileen ku xigeenka Xeer ilaaliyaha Qaranka Maxamed Cabdiraxmaan Mursal.
Madaxweyne Biixi oo Addis Ababa u Safray
Madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi iyo wefti uu hoggaaminayo ayaa maanta safar rasmi ah ku tagay magaalada Addis ee Itoobiya.